Ọmụmụ Archives »Mahadum Hodges
100% Nlele Nleta Mba
100% National Exam Pass Rate Ekelere klas Nlekọta Ahụike Ahụike nke Mahadum Hodges nke 2017 maka ọnụego 100% Pass na ule mba ha! Tozọ na-anọchi anya Hodges U! Obi dị anyị ụtọ ịkpọ gị Hodges Alumni anyị a ma ama.	GỤKWUO
Geszọ Hodges tozọ Na-aga nke Ọma Na-enye Mmemme na Inweta Ọhụrụ
Geszọ Hodges si enwe ihe ịga nke ọma na-enye mmemme na nnweta ohuru Na mbọ iji nye ụmụ akwụkwọ “mmemme ohuru na nnweta nnabata dị ukwuu,” Dr. John Meyer, onye isi oche nke Mahadum Hodges, na-atụle ụzọ ọhụrụ mahadum ga-aga nke ọma na Saturday, October 27, 2018 mbipụta nke Naples Daily News. Gụọ akụkọ zuru ezu ebe a. Gaa na waysways.hodges.edu ịchọta [...]	GỤKWUO
Onye Ndú Homegrown
Onye Nduzi nke Homegrown - #MyHodgesStory nke Jacob Winge Jacob Winge bụ ezigbo ihe atụ nke ihe ịbụ onye ndu pụtara, na dịka Winge, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ndị họọrọ ị nweta akara ugo na-achọ ịghọ ihe ọzọ - iji weghara ma nwee mmetụta. Naanị na etiti 20s, ọ na-etinye aka na [...]	GỤKWUO
Uru ato ị ga-erite na inweta nzere ga-aga n’ihu n’ọrụ gị
Uru Atọ ofchọta Ọkwa ga-aga n’ihu na Ọrụ Gị Ndị okenye na-amụ ihe laghachitere n’ụlọ akwụkwọ maka ọtụtụ ebumnuche. Ọtụtụ mgbe, ndụ na-adaba ma na-eme ka anyị debe ihe mgbaru ọsọ onwe onye n'akụkụ; agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọtala onwe gị na ọrụ gị, ịlaghachi ụlọ akwụkwọ nwere ike ịbụ azịza ị [...]	GỤKWUO
Ndị Ọkachamara Azụmaahịa Na-aga nke Ọma Na-achọpụta Njirimara 8 nke Ezigbo Onye Ndú
Ndị ọkaibe azụmaahịa na-aga nke ọma kọwaa 8 Njirimara nke Onye Ndú Ọma Anyị niile nwere ike ịchọpụta ndị isi ma ọ bụ ndị ndụmọdụ pụtara ìhè na ndụ anyị, mana oge ụfọdụ ọ na-esiri ike ịkọwapụta nka ndị mere ka ha bụrụ ihe kwesịrị ịrịba ama - ọkachasị mgbe ị nweghị onye ndu ọrụ n'onwe gị. Ọ bụ ezigbo onye ndu onye nwere ike ịkọwapụta [...]	GỤKWUO
Wzọ 4 MBA nwere ike inyere gị aka ịkwalite ọrụ gị
4 ayszọ MBA Pụrụ Inyere Gị Aka Adga n’ihu Ọrụ Gị na Akụkọ ihe mere eme, ụzọ nke ọganihu ọrụ gụnyere ịrara onwe gị nye na ịrụ ọrụ pụtara ìhè na otu nzukọ. Njikere nke onye ọrụ na ike idozi nsogbu ndị ọhụrụ yiri ka ha ezuola. Otú ọ dị, ugbu a, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-asọmpi nke na ndị na-aga ime obodo yiri ka ha kwesịrị imekwu ihe na [...]	GỤKWUO